Ogaden News Agency (ONA) – Ku danaysiga Itoobiya iyo dareen la’aanta Daba-qoodhiga – Rabaax. M. Cabdi
Ku danaysiga Itoobiya iyo dareen la’aanta Daba-qoodhiga – Rabaax. M. Cabdi
Soomalidu waxay halhays u leeyihiin; Somalidu been way sheegtaa ee been ma maahmaahdo. Sidaa darteed, maah-maahaha waa odhaah khibrad lagu ogaaday.
Maah-maahaha dalkeena caanka ka ah waxaa ka mid ah; Xabashi afkay kugu dhunkatay ayay kugu qaniintaa. Waxaa kaloo ka mid ah; Xabashi iyo dameero dariska u xigay ruugaan. Somalida dhamaan wixii uga yimaada dhanka Itobiya oo ku hadlaya afka Amxaariga ama afkaloo aanay aqoonin waxay u yaqiineen Xabashi ama Amxaaro. Qawmiyadahan jiritaankooda waxaa ugu horeysay dadkeena xukunka Wayaanaha. Sidaa darteed waxba kama aynaan aqoonin qawmiyada kale sida qawmiyadda Tigreega ee dhibaatada ugu weyn gaadhsiisay shacabkeena intaan dagaalamaynay anaga iyo Xabashi/Itobiya. Waxaa jira maah-maahyo ay leeyihiin dadka ay dariska yihiin oo farabadan oo intaba muujinaya inay yihiin dad khiyaana badan oo aan la aamini Karin, qanjidh ah oon lahayn dulqaad iyo isaaminaad toona. Waxaa ka mid ah maah-maahyadaa midda odhanaysa; Nin Tigree ah hadaad martigaliso habeenkii, waaga markuu u baryo ayuu kaa sii qaadan gogoshaad u dhigtay.
Waa xaqiiqa la tijaabiyay maah-maahyadaa, wayna dhacday oo la soo taabtay dhulkeena in Itobita ninkii u adeega xaalkiisu uu yahay; Aabeesa ninkii koriyaw adi umbaa u aayi. Anagoo saas u og madmadawna nagaga jirin ayaa waayahan danbe waxaad moodaa in ay jiraan qaar aad oogu maman gumaysiga, difaacaya danihiisa una dhaga nugul dhibka uu iyaga qudhooda ku hayo.
Marka dadkaa ayaga ah ee danaha gumaysiga ilaalinaya dhadhamo iyo dheef intee la’eg ayay ka helayaan? Ma danbaa oogu jirta inay hoos gableeyaan niman ay ogyihiin inaan laa aamini karin oo horey u soo tijaabiyeen? Su,aalahan iyo kuwa kale oo lamid ah oo dad badan ay isweydiiyaan lana yaaban yihiin, ayaan rabaa in aan wax yar kaga ifiyo, dadkaan ogayna aan dareensiiyo .
Ugu horeyn, gumaysigu meel walba oo uu dunida ka joogo waa isku dhaqan amaba waxaa la odhan karaa waa isku mid, hadday jiraan waxay ku kala duwan yihiina waa un inta ay kala xadaarad iyo horumar danbeeyaan. Gumaysi wuxuu caan ku yahay inuu dadka uu gumaysto ka dhex samaysto qaar hangool u ah oo shacabka uu ku gumaado. Itobiya oo ah gumayste gaboobay, waxay samaysatay dad badan oo u shaqeeya danaheeda ay ku dulaynayso dadkeenana u fuliya. Waxaase la yaab leh, kuwa noocaas ah ee hagar la’aanta ugu adeegaya, waxaa la filayay sida kuwa ugaadhsada ay ayga lagu ugaadhsado u dhaqaaleeyeen in loola dhaqmo oo la dhaqaaleeyo.hasa ahaatee wakiiladeeda Jigjiga u fadhiya waxaa mar walba dhacda in dhulka hoostiisa la galiyo gaar ahaan marka laga dhamaysato danaha laga leeyahay. Kuwii ay madaxwayne-yaasha loogu magac darey, meesha midwalba uu ku danbeeyey waynu wada garan; xadhig iyo xabaal olalin. Kuwa ay ku magacaabaan wasiiro iyaga hadalkoodaba daa. Waxaa loo tuuraa sida iskaalsaha, kuwa hawaarinta iyaga hadalkoodaba ha sheegin. Nin aabihii la soo afduubayo oo hortiisa lagu qaraacayo oon ka hadli karin asaga maxaad ka filaysaa. Sidaa si ka daran oo aanan suurayn karin ayaa loola dhaqmaa kooxdan Hawaarinta. Duli nimada dil ayaa u dheer markii laga dhamaysto ama laga shakiyo inuu yarehe danqanayo daw ayaa laga tuuraa oo dunidaa la dhaafin.
Waxaan u soo joognay, oo ah arin maalinwalba dhacda ayagoo intii duurka loo diray markay soo noqdeen ayagoo nool lagu yidhi maxaa idin soo celiyay?
Taasoo macnaheedu yahay idinkoo nool maxaa idin soo celiyay ood u soo dhiman waydeen? Ka dibna la amro inay noqdaan oo ama madaxyadooda keenaan ama madaxyada nabadiidka.
Maxaa ku dhacay kuwii ugu necbaa ONLF? Maxaa ku dhacay Ibraahim Xaad, Jamiil, Cabdi bade, iyo, iyo.? Sow dhamaantood jeelkii lagu xidhay kuway soo eedeeyeen ama soo xidheen laguma ciqaabin oo laguma eedeeynin inay yihiin ama ay gacansaar la leelyihiin nabadiidka (ONLF). Maxaa ku dhacay kuwii ka falaagoobay jabhadda ee beenta iyo aflagaadada aan jirin damcay inay ugu dhawaadaan gumaysiga?
Gumaysi xaaladiisu waa sidaa. Marka danta laga leeyahay laga gaadho dabaqoodhiga waa dil ama bahdalaad. Waa dad gacantooda isku duleeyay, dadkoodeena ka fogaaday oo fadhi ooma yaal. Dabaqoodhiyaw goormaad wax dareentaa? Miyaadan garan haynin midkan ku dulaysanay inay hooyo dhashay isagaba ood dad wada tihiin oo dulayntiisa aad iska dul qaadi kartid!
Wax dareen Daba-qoodhiyow, damiirku wuxuu diidi in aad is dulayso. Diintu waxay ku fari in aad u halganto sharaftaada iyo diintaada iyo dalkaaga iyo diintaada. Inaad shahiido adigoo taagan ayaa kuu dhaanta inaad bakhtido adigoo foorara. Waanadu waa lama huraan, waa nin kuu Ilaahay ku nafaco. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين